Ngaloo dubana wathandaza ngokukhawuleza kwi-bar, wahleka kwiinkampani zabahlobo, wadla i-ayisikrimu, kwaye ngoku kusasa ngokungaze kwenzeke isandi. Ubusika bunikezela nje ukuzonwabisa kwangexesha, kodwa kunye nezifo ezahlukahlukeneyo ezinokuphanga kakubi ubomi kubani na.
Ngubani owamvakala isandi?
Ngokuqhelekileyo, ilizwi linyamalale ngenxa yesifo esichengileyo esithiwa laryngitis. Kuyaziwa ukuba ebusika, ukukhuseleka kunokunyamezela ukuhlaselwa okukhulu kwezinto ezincinci, kunye nokubanda kungabandakanyeki ekukhuseleni. Iimpawu ezincinci zifaka i-larynx, apho umhobho ukhula, ukuvuvukala kwenzeka, okukhokelela ekubeni awukwazi ukuthetha. Eyona ndlela, kuphela wheyyy.
Ukuba akukho ntsholongwane, kwaye awuzange udilize ilizwi lakho kwibala lemidlalo okanye kwi-bar - karaoke, oko kungenako. Ngamanye amaxesha ilizwi liphela ngokukhawuleza ngaphambi kokubaluleka kokusebenza, ngenxa yoxinzelelo. Kunzima ukuphatha ukuphambuka okunjalo, kubalulekile ukubonisana neengcali.
Okokuqala, kufuneka uphuze kakhulu, njengawo nawuphi na ubanda. I-Morse, itiye kunye nemon, i-juice. Ngokuchasene neenkolelo ezithandwayo, ukusela akufuneki ukuba kushushu. Ukutya okutshisayo kunye namanzi ngenxa yomqala oyingozi uyingozi. Kulula ukufumana ukutshiswa kwamathambo okutsha kunye nokukhuseleka. Ngako oko usela kuphela iziphuzo ezifudumeleyo, kuya kunceda ukuphucula umqala kunye nokuzola.
Ikomkhulu eliyintandokazi lokukhubaza kubanda kunye nobusi. Musa ukukhawuleza ukuphathwa ngale ndlela. Ubusi - into ebalulekileyo kakhulu, equlethe i-antiseptics yemvelo, kodwa ubisi - indawo efanelekileyo yokuvelisa ibhaktheriya. Kuye kwavela ukuba inyosi ibulala enye inxalenye ye-microbes, kwaye ubisi lukhuthaza ukuveliswa kokunye. Ukutshintsha ubusi ngefuthe elifudumele okanye i-oors, umphumo uya kuba ngcono.
Abanye abantu bacinga ukuba umqala wesifo udinga ukuphathwa ngeendlela ezigqithiseleyo. Umzekelo, ice cream. Ngokumangalisayo, kodwa ngamanye amaxesha le ndlela isebenza ngokwenene, kodwa akunakwenzeka ukuqikelela ukuba iya kusebenza njani. Ukutya okutyayo, njengotshisayo, kuyacaphukisa kakhulu iiseli zomqala, ubanda bubanda ama-microbes okwesikhashana, kodwa kwiindawo zobisi baya kukhulula ngokukhawuleza. Ngoko ke, kungcono ukuba ungathathi ingozi.
Iindlela eziqhelekileyo zokuphatha izifo zomlomo ziyahlanjululwa. Iityuwa kunye nesoda, i-herbal infusions - yonke isebenza. I-brew chamomile, i-calendula, i-oregano okanye i-sage kunye nomphefumlo uphawula rhoqo iiyure ezimbini, umphumo uza kubona ngokukhawuleza.
Ukuze ube nempembelelo yeziyobisi kunye neenkonkxa zonyuka, gquba intamo yakho ngekhanda elifudumele kwaye ungalususi nakubusuku. Ukufudumala umqala wakho, ukhawulezisa ukutshatyalaliswa kwamagciwane.
Ukuze loo nkathazo ingenzeki, kufuneka uthabathe amanyathelo. Umzekelo, ungakulibali ngokunyuka kwamavithamini ekwandeni kwebusika - oku kuya kukwandisa umzimba wakho kunye namathuba okuba uphilile ngexesha elifanayo. Okwesibini, musa ukuthwala iziphuzo ezibandayo kunye ne-ayisikrimu, ngakumbi kwisitalato. Okwesithathu, qiniseka ukuba intamo nemilenze zihlala zifudumele, ngaphandle koko umngcipheko wokuba unesifo esiphumeleleyo siphumelele kakhulu. Okwesine, musa ukuwayeka ukugonywa. Zama ukukrazula nokuthetha ngaphantsi kwisitrato, ukuba kubanda kakhulu kwaye ungayinxibi intambo yezwi kunye nemithwalo engqongqo ngeli xesha. Zonke iingoma kunye nemihla yovuyo inokulinda ixesha elide ngaphambi kokuqala kwetyuwa.
Esinye isilungiso esilungileyo sokukhusela amaqanda amaninzi kunzima. Fundisa umzimba wakho kubanda kwaye ufundise ukuwuhambisa kalula. Ukongeza kwi-douches eziqhelekileyo, kunokwenzeka ukunyanga umlenze womqala emanzini kwisibhamu sokutshiza. Qala ngee-degrees ezingama-35 kwaye, ukuhlahlisa izinga lokushisa nge-1 digri ngemihla, kuletha kwi-15. Kukulungele ukutshisa umqala wakho ngamanzi amaminerali.
Ngaphandle koku. Khumbula iingcebiso zikagogo - ungasiphuzi itiye nobusi phambi kokuba uhambe ekhaya.
Ukugcina impilo ebusika akulula, i-vitamin deficiency, ukushisa okuphantsi kuya kunciphisa umzimba kunye nokukhuseleka. Kodwa kukho iindlela zokumelana neebhaktheriya, kufuneka nje uzikhathalele kwaye uzikhusele kwizifo ezinokwenzeka.
I-rhinitis ye-allergen, iimpawu kunye nokonyango
Iipistachio Nuts, Properties Properties
Vala umlomo wenkohliso
Ukuxinezeleka kumadoda: uncedo
Iipatata zitshintshwe kwi-multivark
Uthando lwe-horoscope kulo nyaka